कपिल शर्मालाई पछि पार्दै सुनील, भारती र अभिषेक सयको सूचिमा, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
कपिल शर्मालाई पछि पार्दै सुनील, भारती र अभिषेक सयको सूचिमा
एजेन्सी। चर्चित फोब्र्स म्यागेजीनले सबैभन्दा धेरै कमाइ गर्ने भारतीय कलाकारको लिस्ट जारी गरेको छ। यो लिस्ट १ अक्टोबर २०१७ देखि ३० सेप्टेम्बर २०१८ कोबीचमा उनीहरुले कमाएको पैसाको आधारमा जारी गरिएको भारतीय संचारमाध्यमले जनाएका छन्।
यो लिस्टमा भारतीय टेलिभिजनका कलाकारको कमाइ उल्लेख गरिएको छ। यो लिस्टमा ९ टेलिभिजन आर्टिस्टले आफ्नो ठाउँ सुरक्षित गर्न सफल भएका छन्।
कमेडियन भारतीय सिंहमा बृद्धि भएको छ। यो लिस्टमा भारती ७४ औं नम्बरमा छिन्। उनको वार्षिक कमाइ १३.९५ करोड छ। विशेष कुरा के भन यो लिस्टमा कपिल शर्माको नाम समावेश गरिएको छैन। गत वर्ष कपिल शर्मा यो लिस्टको १८ नम्बरमा थिए।
गत वर्ष कपिलले वार्षिक ४८ करोड कमाइ गरेका थिए। २०१६ मा कपिल ११ नम्बरमा थिए। कपिलले सो वर्ष ३०.१७ करोड रुपैयाँ वार्षिक कमाएका थिए। कपिल शर्मा १२ डिसेम्बरमा गिन्नी चतरथसँग विवाह बन्धनमा बाँधिदै छन्।